Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 19 Matenga anozivisa kubwinya kwaMwari;+Denga rinozivisa* basa remaoko ake.+ 2 Zuva nezuva kutaura kwazvo kunobuda,Uye usiku hwega hwega zvinoratidza ruzivo. 3 Hapana kutaura, uye hapana mashoko;Inzwi razvo harinzwiki. 4 Asi zvazvinotaura zvinosvika* munyika yese,Uye mashoko azvo anosvika kumagumo enyika.*+ Akadzikira zuva tende kumatenga; 5 Rinoita semurume ari kuroora ari kubuda muimba yekuchatira;Rinopembera semurume ane simba ari kumhanya munzira yake. 6 Rinobuda richibva kune mumwe mugumo wematenga,Uye rinotenderera kusvika kune mumwe mugumo;+Uye hapana chakavanzwa pakupisa kwaro. 7 Mutemo waJehovha wakakwana,+ unodzosa simba.*+ Chiyeuchidzo chaJehovha chakavimbika,+ chinochenjedza asina ruzivo.+ 8 Mirayiro inobva kuna Jehovha yakarurama, inoita kuti mwoyo ufare;+Murayiro waJehovha wakachena, unoita kuti maziso apenye.+ 9 Kutya Jehovha+ kwakachena, kunoramba kuripo nekusingaperi. Mitongo yaJehovha ndeyechokwadi, yese yakarurama.+ 10 Inodiwa kupfuura goridhe,Kupfuura goridhe rakawanda rakanatswa,+Uye inotapira kupfuura uchi,+ uchi hunoyerera huchibva mumazinga. 11 Mushumiri wenyu anoyambirwa nayo;+Kuichengeta kunounza mubayiro mukuru.+ 12 Ndiani angaziva zvikanganiso zvake?+ Ndiregerereiwo pazvivi zvandisingazivi kuti ndakaita. 13 Uye dzorai muranda wenyu kuti arege kuita mabasa ekuzvikudza;+Musaarega achindikunda.+ Ndichabva ndava akakwana,+Uye ndichange ndisina mhosva yezvivi zviri pachena.* 14 Mashoko emuromo wangu nekufungisisa kwemwoyo wanguNgazvikufadzei,+ haiwa Jehovha, Dombo rangu+ neMudzikinuri wangu.+
^ Kana kuti “Nzvimbo huru inozivisa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “tambo yazvo yekuyeresa inosvika.”
^ Kana kuti “enyika inobereka.”
^ Kana kuti “yezvitadzo zvakawanda.”